Global Voices teny Malagasy » Masoarabo: Fihaonana mangina sy fiarahabana Eid · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Novambra 2018 16:01 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Bahrain, Ejipta, Emirà Arabo Mitambatra, Libia, Oman, Fivavahana, Hehy, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Eid  ny ao amin'ny tontolo Arabo ary mankalaza ny faran'ny Volana Masina Ramadany  miaraka amin'ny tabataban'ny hetsiky ny bilaogin'izy ireo ny bilaogera Arabo.
Avy ao Libya, Lona sy A.Adam, manoratra ao amin'ny Flying Birds , mirary antsika Tratry ny Eid  amin'ny alalan'ny fandefasana sary.
Fihetseham-po tahaka izany ihany koa no zarain'i Te3meh  avy ao Ejypta, izay mandefa sary noforonina.
Bilaogera Omani Zaid Al Saidi manana fanontaniana vitsivitsy momba ny Eid.
Isaky ny Eid, manontany ny tenako aho hoe nahoana ny olona no mankalaza ny Eid ary nahoana izy ireo no faly mandritra izany. Inona no mampiavaka ny Eid? Nahoana isika no tsy afaka ho faly isan'andro mandritra ny taona?
Osama , avy ao Emirà Arabo Mitambatra mankalaza ny Eid ihany koa, ary nanokatra ny masony amin'ny fomba fanao vaovao .
Te-hahazo anjara avy amin'ny mofomamin'ny Eid … ny mpanjaitra .. ny mpivarotra .. ny sôkôla sy ny fivarotana vatomamy .. ary koa ny mpanety mihitsy aza ny tsirairay. Nampitomboiny ny sarany tsy nisy fampilazana mialoha. Ankoatra izany, mangataka fanampiny koa izy!!
Manoratra avy any Bahrain, bilaogera Saodiana Sara  miresaka momba ny zavatra niainany tao amin'ny fanjakana nosy akaikin'ny tranony, izay alehany any am-pianarana. Na dia misaraka amin'ny Saodiana amin'ny lalana 25km aza i Bahrain, dia tena mifanavaka eo amin'izao tontolo izao ny firenena roa tonta.
Amin'ity herinandro ity, milaza amintsika ny lalana noraisiny niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy , izay vao nahazo ny fahazoan-dàlana hitondra fiara izy.
Tsy efa nolazaiko anao ve fa niaraka tamin'i Zain, zanak'olo-mpiray tam-po amiko aho izay vao avy nahazo ny fahazoan-dàlany hitondra fiara ary nankalaza izany fotoana izany niaraka taminy? Tsy tianay ho sahirana amin'ny olana tsy misy dikany toy izany izy ary handao ny fianarany. Napetako ny fehikibo fiarovana raha niditra tao anatin'ny fiara Porsche menany aho. Nandeha teny amin'ny seranam-piaramanidina izahay mba handray mpanao gazety malaza avy any Londra tonga hanao zavatra manokana ao Bahrain. Teny an-dalana dia nandefa ny radio izy. Adala i Zain ary tsy fantatro izay hataony amin'ny fahazoany ny fahazoan-dàlana hitondra fiara satria tsy afaka mitondra fiara ao Arabia Saodita izy ary samy avy amin'ny oniversite iray any Bahrain miaraka amin'ny mpamilinay tsirairay avy izahay.
Nitondra an'i Sara niverina tamin'ny lalana efa nahatratra azy tamin'ny lozam-pifamoivoizana ny dia raha niala sasatra tao Monte Carlo izy ary nahatohina ny rainy sy ireo manodidina azy izany rehefa nanontany izy raha natahotra ny rainy izy.
Nolazainy tamiko tamim-pahatahorana fa te-hiala amin'ny didy jadon'ny rainy izy, nijery ahy izy sady nitondra fiara moramora ka tsy mitabataba azy sy tsy hahatonga azy ho very fifantohana (eny an-dalana). Manontany ahy izy: matahotra ny rainao ve ianao?
Niverina teny an-dalana, nilaza tantara iray mahazatra loatra ho an'ny zazavavy any Bahrain izy.
Raha nitondra ny fiarany mena i Zain, nisy tovolahy nanaraka anay tamin'ny fiarany nandritra ny dia manontolo. Hitan'izy ireo fa mampientanentana ny toe-javatra ary nanaraka anay nandritra ny lalana manontolo mankany amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo. Gaga izy ireo mahita tovovavy Saodiana mitondra fiara raitra eny amin'ny araben'i Manama. Notantarain'i Zain avy eo ny tantaram-pitiavany mampientanentana sy ny fihaonany mahatsikaiky tamin'ny lehilahy tafahoana taminy tamin'ny aterineto. Imbetsaka tafintohina izy noho ny bikan'izy ireo satria manana endrika tsy takatra saintsainina izy ireo.
Gaga? Mankanesa ao amin'ny bilaoginy ary vakio bebe kokoa momba ireo fihaonany mangina sy ny zavatra niainany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/20/130419/
 Tratry ny Eid: http://atlascenter.blogspot.com/2006/10/happy-eid.html
 Fihetseham-po tahaka izany : http://te3mah.blogspot.com/2006/10/blog-post_116150359140143659.html
 fomba fanao vaovao: http://osama.ae/archives/2006/10/22/babrbercomplain/
 lalana noraisiny niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy: http://sarahjassi82.jeeran.com/archive/2006/10/108476.html